“Ciyaartoyda Casrigan waa sida reer guuraa, lacag unay daba joogaan.”. Totti oo ka hadlay heshiiskii uu Higuain ugu biiray Juventus – Gool FM
“Ciyaartoyda Casrigan waa sida reer guuraa, lacag unay daba joogaan.”. Totti oo ka hadlay heshiiskii uu Higuain ugu biiray Juventus
(Roma) 26 Luulyo 2016. Rugcadaaga ku gaamuray AS Roma Francesco Totti ayaa cambaareeyay 90-ka milayn oo euro uu weeraryahanka Napoli Gonzalo Higuain ugu biiray kooxda Juventus isagoona sheeganaya in ciyaartoyda casrigan aysan wax daacadnimo ah u muujineyn kooxdooda.
Higuain ayaa heshiis shan sano ah qallinka ugu duugay horyaaladda Serie A ee Jeventus si uu u soo afjaro qiyaas fikradeed la isla dhex qaadayay usbuucyadan taa oo la xiriirineysay kooxda ka dhisan Turin, laakiin ninka halka koox ku caan baxay ee Totti ayaan la yaabaneyn go’aankii uu Higuain ugu biiray kooxda uu macallinka u yahay Massimiliano Allegri.
“Ciyaartoyda casriga waa sida reer guuraa, waxay daba socdaan lacagta, ma daba socdaan wadnahooda, inta badan ciyaartoyda ma raacaan wadnahooda. Waxay go’aansadaan inay meel kale u dhaqaaqaan si ay koobab ugu guuleystaan iyo inay lacago badan kasbadaan,” Totti ayaa sidaa u sheegay La Gazzetta dello Sport.
“Inbadan ayay isbadeshay kubbada cagta, waa lacag uun iminka. Ciyaartoyda waxay markasta badelayaan kooxahooda, si ay lacago badan u sameeyaan, waxay ku saabsan tahay inta badan lacag halkii ay ku saabsanaan lahayd jaceyl.
“Dadku waxay soo aadayaan garoomada si ay nafsadooda ugu raaxeeyaan ayna arkaan ciyaartoyda oo howsha ku jira kuwaa oo had iyo jeer garab ahaan doona kooxdooda. Waxay filanayaan inaan la khiyaamin.
“Bal hadda eeg waxa ku dhacay Higuain, oo Napoli uga tagay si uu ugu biiro Juventus waa masiibo.
“Laakiin waa wax caadi u ah ciyaartoyda ajaanibta ah maalmahaan si ay koox kale u aadaan halkaa ay lacago badan ka sameyn karaan. Waa dhibaato la xiriirta maskaxda.
“Ma ahan inay ajaanibta oo dhan yihiin sida Diego Maradona.”.
Faah-faahinta kulankii ay Puntland ku qaaday tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya+SAWIRRO
Tababare Jurgen Klopp oo Sakho ku yiri 'Gurigaaga Aad'